Ekutenxeni, ubuNgcali kunye neeNqobo ezisemgangathweni-Impendulo kwinqaku likaProf. Yoram Yuval, "Abaphambuki", uShabbat P. P. Akef Supplement - IKholamu eqhubekayo (Ikholamu 26) - Rabbi Michael Avraham
Ekutenxeni, ubuNgcali kunye neeNqobo zeNqobo - Impendulo kwinqaku likaProf. Yoram Yuval, "Abaphambuki", uShabbat P. P. Akev - IKholamu yokuQhubeka (Ikholamu 26)
8 izimvo	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
Kwikholamu eyangaphambili Ndaphawula kwinqaku likaProf. Yoram Yuval kwi-Shabbat supplement of Makor Rishon P. ngenxa yalo nyaka (XNUMX). Kuya kufuneka kwakhona ubone ingxoxo ephuhliswe kwiincoko ezingezantsi kweposti yam.
Impendulo yam kuProf. Yuval's yapapashwa kuguqulelo olufinyeziweyo kwiShabbat supplement P. Ra'a (kunye no Ezinye izimvo Inika umdla into yokuba zonke zifanelekile ukuba zifundwe ). Nanga amazwi am abhalwe apho:
Ekutenxeni, ubuchule kunye neenqobo ezisemgangathweni
(Impendulo kwinqaku likaProf. Yoram Yuval, "Abaphambuki", iShabbat yongezelela uP. Akev)
Inqaku likaProf. Yuval Luca linomxube onzulu wemilinganiselo kunye nezibakala. Kunengqiqo ukukhankanya ukuba lo mahluko wawulikhandlela ezinyaweni zikayisemkhulu ongasekhoyo okhankanywe kweli nqaku, yaye kulusizi ukuba akawunanzi.
Amazwi akhe ame phezu kweentsika ezintathu: 1. Umzekelo wobudlelwane obuhle kunye nengcali. 2. Inkcazo yengqondo yokuphambuka ngokwesondo (ukungakwazi ukuthanda umntu wonke). Iingqinisiso zenzululwazi: Ubufanasini ayisosiphumo sokuzikhethela kodwa yimvelaphi ephilayo, kunzima kakhulu ukutshintsha kwaye kuyingozi ukuzama. Sele ilapha ithi ngokufutshane: 3. Imodeli ecetywayo nguYuval ayilunganga (jonga amanqaku emini G) kwaye ayibalulekanga kwingxoxo apha. 1. Inkcazo yengqondo nayo ayihambelani nengxoxo. 2. Le mibuzo yobungcali ayinamsebenzi kwingxoxo. Ndiza kuchaza ngoku.
Ngenye imini ndandihleli kwikollel eBnei Brak kwaye umfundi weza kum wabuza ukuba iglasi yayimanzi okanye iqinile. Ndamxelela ukuba ngokunxulumene nemithetho yeglasi yeShabbat iqinile, nangona iifiziksi zivame ukuyichaza njengolwelo kwiimfuno zabo zobugcisa. Kwaye umzekeliso, ukuba i-psychiatry ichaza ukugqwetheka ngokwesondo njengokungakwazi ukuthanda umntu wonke - ihlazo labo. Kodwa kutheni le nto i-halacha okanye isimilo kufuneka yamkele inkcazo yobuchwephesha kwaye iyisebenzise kwinqanaba eliqhelekileyo? Ngaphezu koko, iinkcazo ayisiyonto ifunyenweyo, ngoko ke ingcali ayinanzuzo ngaphezu komntu oqhelekileyo ngokunxulumene nabo. Oogqirha bengqondo banako kwaye kufuneka bachaze iikhonsepthi zabo kwiimfuno zobugcisa, kodwa oko akunanto yakwenza nombuzo oqhelekileyo. UMichel Foucault ubhale ukuba ukuxilongwa kwengqondo kugcwele kuqikelelo lwexabiso. Nangona wayengomnye wabanduleli be-postmodernism emehlweni am, wayenyanisile ngayo. Ewe, kabini ngemini nokuba iwotshi yokuma ibonisa ixesha elichanekileyo.
Ugqirha wengqondo unokugqiba ngemvelaphi yobufanasini. Ngaba inemfuza, indalo, okanye enye imvelaphi. Unokugqiba enoba unokunyangwa ngaziphi iindlela, yaye iyintoni imiphumo yonyango ngalunye. Ezi zonke zizigqibo zobuchwephesha, kwaye zicinga ukuba ulwazi lwenzululwazi lukhona (kwaye ngokuqinisekileyo aluphelelanga kule meko, ngokombono wam awugxininisi ngokwaneleyo kumagama kaYuval), ingcali inokubanika iimpendulo. Kodwa umbuzo wokuba oku kuphambuko kunye nendlela ekufuneka iphathwe ngayo ngumbandela wenkcazo eqhelekileyo kwaye kungekhona ukuzimisela kochwepheshe (jonga amanqaku angasentla).
Izimvo ezimbini ezingakumbi:
A. Njengengcaphephe encinci yengqondo, ndiyathandabuza ingcaciso ecetyiswe nguYuval yokutshintsha kwesimo sengqondo sengqondo malunga nobufanasini. Ngokoluvo lwam, olu lutshintsho ikakhulu kumaxabiso kwaye hayi ngokwesayensi. Inxalenye ebalulekileyo yoluntu namhlanje ikholelwa ukuba lo mcimbi awukho ukuziphatha kakubi (nokuba omncinci uyavumelana nale nto) kwaye ke akayiboni njengento etenxayo. I-Psychiatry apha itsalwa phantsi yimilinganiselo yentlalo, kwaye kungekhona ngenye indlela. Cinga ngekleptomania. Masicinge ngenjongo yengxoxo ukuba inemvelaphi yemfuza kwaye ayinakuguqulwa (iguqulwe). Ngaba oku kuthetha ukuba i-kleptomania ayikho ukutenxa? Akuvumelekanga kwaye kuyingozi ukuba, ngoko kunengqiqo ukuchaza i-kleptomaniac njengegqwetha. Oku kunjalo nangona kukho utyekelo lokuba akuthethi ukuba umntu uyeba ngokwenene (njengoko uYuval wachazayo malunga nobufanasini), kwaye nalapho ayinakunyangwa kwaye inemithombo yofuzo okanye yendalo (njengoko bendicinga ngenjongo ingxoxo). Umahluko phakathi kwekleptomania nobufanasini kukuba inkoliso yoogqirha bengqondo namhlanje ikholelwa ukuba kuvumelekile yaye akuyongozi ukuba lifanasini, ngoxa ubusela bukwalelwe yaye buyingozi emehlweni abo. Kucacile kuthi ukuba ezi ziinqobo kwaye ayizizo iinyani.
B. UYuval ubhala athi “wonke amadoda onqulo afundileyo” ayazi ukuba kwigumbi labagula kakhulu unokulala umntu ofileyo ngokupheleleyo ontliziyo ibetha. Ndicinga ukuba ndingumntu ofunde kakhulu (kwaye ndikwakholelwa ngokwenene), kwaye ngokwenene andiyazi loo nto. Ngaphezu koko, naye ngokwakhe akakwazi oko. Ayinanto yakwenza nemfundo (nangona inkolo mhlawumbi ewe), inciniba kuba inkcazelo yokufa nobomi iqhelekile kwaye ayiyokliniki. Ugqirha unokugqiba, ukuba kukho konke, yiyiphi imisebenzi ekhoyo kwimeko enjalo, kwaye yintoni na ithuba lokubuyela kuyo kubomi obuqhelekileyo. Kodwa akakwazi ukugqiba ukuba umntu onjalo uyaphila okanye ufile, yaye ngokuqinisekileyo hayi ukuba anganikela ngamalungu (okuthi ngokoluvo lwam lobuqu kuvumelekile kwaye kunyanzelekile nokuba uthathwa njengomntu ophilayo. Jonga amanqaku kwintsimi ye Kt). Yonke le mibuzo yexabiso kwaye ayiyonyani. Oogqirha abahlukeneyo abangafuniyo ukuyamkela le nto ngomnye umqondiso wokuba umxube wexabiso kunye neenyani awubonakali kuphela kubantu abaqhelekileyo.
UProf. Yuval uphendule kule webhusayithi yongeza impendulo ngokubanzi kuthi sonke. Impendulo ethile kumazwi am (kunye noDkt. Azgad Gould) iphakanyisiwe Kwiwebhusayithi yakhe Kwaye olu lulwimi lwakhe:
Ngembeko kaRabhi uGqr. Michael Avraham
Iziko eliPhezulu leTorah
Onyanisekileyo, uRabbi Shalom kunye noBracha,
Okokuqala, yazi ukuba lowo usayine apha ngasezantsi uyakuxabisa kakhulu kunye nomsebenzi wakho. Andikho kwihlabathi leTorah ukuya kuthi ga kwinqanaba elindivumela ukuba ndixabise iTorah kunye nomsebenzi we-halakhic, kodwa i-neurobiology kunye nefilosofi encinci endiyiqondayo yayanele ukuba ndiyonwabele kakhulu incwadi yakho ethi "Isayensi yeNkululeko", endicinga ukuba umsebenzi wokuqala kunye nomhle wengcinga.
Xa kuthelekiswa nokonwabela kwam incwadi yakho, icace gca kwimpendulo yakho enganelisiyo kumanqaku athi "ayitenxisi". Yiyo loo nto ndonwabile malunga nolunye uphuculo endilwenzile apha kum, ukuze ndizame ukukukholisa ngobulungisa bamazwi am, kwaye ukuba akunjalo ukukholisa, ke uqale ukwakha ibhulorho phakathi kwentaba yakho kunye nentaba. ntaba yam. Masiqale ngezinto endivumelana nawe ngazo:
Ndivumelana nawe kabini (kwaye hayi kabini ngosuku) malunga noMichelle Foucault. Zombini ngokubhekiselele kwi-postmodernism, endiyikholelwayo ukuba isicatshulwa esingenanto, kwaye ngokubhekiselele ekuzimiseleni kwayo kwi-psychiatric diagnostics, apho, ngelishwa, ulungile kakhulu. Kodwa ndiyakholwa, kwaye andiqinisekanga ukuba apha uvumelana nam, ukuba akunakwenzeka ngenye indlela: igwetyelwe ukuxilongwa kwengqondo, ngokwendalo yayo, ukuba ayiyi kukwazi ukuhlukana neengcamango zexabiso, ubuncinane. kwikamva elibonakalayo. Kwaye ngoko isazi sefilosofi sinokufikelela-ukwahlula ukwahlukana okubukhali phakathi kwemilinganiselo kunye neenyaniso, ugqirha wengqondo akanako ukufikelela. Kwaye ngokukodwa akanakuzikhohlisa kunye noluntu ukuba kukho - okanye kunokubakho - ukwahlukana okupheleleyo kwintsimi yakhe. Ndiza kubuyela kuloo nto kamva.
Ndiyavumelana nohlahlelo lwakho olubukhali lombuzo wesimo se-halakhic sendoda elele kwi-intensive care xa ingqondo yakhe iphelile kwaye ingasayi kuphinda isebenze, ngelixa intliziyo yakhe ibetha, kwaye ndifunde into entsha kwizinto ozibhale kwisahluko. Imixholo kwimpendulo yakho. Ngaphezu koko: Ndiyavuya ukuba isigqibo sakho sokugqibela - ukuba kunyanzelekile ukuba unikele ngamalungu ale ndoda - iyafana neyam. Ndiyathemba ukuba uya kuqhubeka nokusebenzisa isikhundla sakho kunye nefuthe phakathi kweBnei Torah ukuze utshintshe abantu abangenalwazi - kunye nabangakholwayo - isimo sengqondo sezinye iinkokeli ze-ultra-Orthodox kunye nelizwe-lonqulo lobuYuda kulo mba.
Kodwa yintoni ongayenza malunga nokwahlula phakathi "kokuphila" kunye "nokufa", awukwazi, ngokombono wam, ukwenza malunga nokwahlula phakathi "kokugqwethiweyo" kunye "nokungagqwethi." Ndiya kuchaza amazwi am: Okokuqala, ngokuchasene noko ubhalayo, ugqirha kunye nendlela yokufumanisa ukuba umntu uyaphila okanye ufile. Ndiyazi le nto yokuqala. Xa ndandisebenza kwisebe labagulayo njengogqirha oyingcali, inxalenye elusizi yomsebenzi wam yayikukufumanisa, ekuqaleni, ukufa kwabaguli abasweleke ngobusuku. Ndisakhumbula, unanamhla, ubuso obuninzi endandibugqume ngeshiti ndilungiselela ukufika komsebenzi wasekhaya, owabathatha wababeka ekuqaleni kohambo lwabo lokugqibela.
Nangona kunjalo ndiyaqonda ukuba unyanisile xa usithi ukuzimisela kwe-halakhic ukuba ngubani "ophilayo" kwaye ngubani "ofileyo" kunokwahluka kukuzimisela kwezonyango, kwaye akuphambuki nangona kunjalo. Kodwa isiphelo esicacileyo esivela kwimpendulo yakho, ukuba inkcazo yengqondo yokutenxa kunye nenkcazo yenkolo (kwaye ngokuqinisekileyo inkcazo yentlalo-yenkolo) yokutenxa nayo ayihambelani, ayibonakalisi inyani.
Makhe sithathe i-kleptomania, oye wayizisa njengetyala lovavanyo. I-kleptomania ayikona ukutenxa. Kukuphazamiseka kwengqondo. Igama elithi ukutenxa ligcinwe kwi-psychiatry, njengolwimi lwesitrato, ngokungaqhelekanga, ukungathethi ukunyameka, ukuziphatha kwimeko yezesondo. Ndiyathemba ukuba awuzami ukusebenzisa imathematika, kunye nexabiso-ungathath' icala, inkcazo yokutenxa kwisiqhelo (a.k.a. ukutenxa okusemgangathweni), ukuze wenze kube semthethweni ukutyhutyha isimo sengqondo esibi sobuYuda bobuOthodoki obuseziko lobufanasini.
I-Psychiatry ayijonganga kuphela "ngokuziphatha" kodwa kunye neziganeko ezizimeleyo; Njengoko ubhale, kwaye ndiyavuya ukuba apha uyavumelana nam, i-kleptomaniac ayifuni ukuba ngokwenene ibe yi-kleptomaniac, kwaye i-homosexual ayifuni ukuxoka kwindoda ukuba ibe yi-gay. Kodwa nanku uphela umzekeliso phakathi komzekeliso nomzekeliso. I-kleptomaniac ilimaza kwaye yenzakalise abanye ekuziphatheni kwayo, kwaye ngoko ukuziphatha kwakhe kuphosakele (ayiphambukanga), kwaye uluntu luvunyelwe ukukhusela kulo. Ngaphezu koko: ukuba uyeba izinto ezixabisekileyo, ukuphazamiseka kwakhe kwengqondo akunakuma kuye enkundleni, kwaye kuya kuqwalaselwa kuphela kwinqanaba leengxabano zesigwebo. Ndicinga ukuba mna nawe sobabini siyavuma ukuba amafanasini ayizozaphuli-mthetho, kwaye ukuba abaxoki indoda - ayicacanga kum ukuba bahluke njani kuwo onke amanye amadoda angamaYuda, nawo ajongana nokwalelwa kweTorah ekubonakaliseni ubuni babo.
Ndibuyela kumbandela wokungakwazi ukwahlula ngokupheleleyo amaxabiso kwiinyani kunye neenyani kunyango lwengqondo. UmKristu ongumKatolika ukholelwa enokholo olupheleleyo lokuba isonka somthendeleko awasifumanayo waza wasitya ngexesha leMisa saba yinyama yokwenene kaMesiya emlonyeni wakhe. Yingcamango yobuxoki kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo, kwaye iyaphambuka kwinkcazo ye-psychosis ngenxa yentlalontle kunye nexabiso eliqhelekileyo - amakhulu ezigidi zabantu akholelwa kuyo. Lo ngumzekelo nje ongephi, kodwa i-psychiatry, xa isiza ekuchazeni, ekuxilongeni nasekunyangeni izinto ezingento yanto, iphuthaphutha ebumnyameni malunga nesiseko sebhayoloji-yenyani kwezi ziganeko.
Ndingavuya ukuba ndikwazi ukubeka ubuchwephesha bam kwinqanaba elifanayo lefiziksi emi kuyo, kodwa ayizukwenzeka ebomini bam, kwaye hleze. Njengoko usazi ngcono kum, umbuzo osisiseko wentanda-bulumko osisiseko salo mba, endicinga ukuba awunampendulo yanelisayo okwangoku, ngumbuzo we-psychophysical causality: ingaba yindlela enye okanye indlela ezimbini okanye ayisebenzi kulo mbandela zonke? Utat'omkhulu owamkhankanyileyo wasebenza, njengawe, ngombuzo we-psychophysical causality, kwaye wayekholelwa ukuba akukho kwaye ayinakuba sisisombululo kuyo (Ignorbimus - asazi kwaye asisoze sazi). Ngaphandle kokuzenzisa ndingakhange ndizame ukungena ebunzimeni apha, eneneni ndiyaluxhasa uluvo lomfundi wakhe, uProf Yosef Neumann, owayecinga ukuba namhlanje akunasisombululo, kodwa ngomso kunokwenzeka (Ignoramus - asazi; kodwa singazi ngenye imini).
Okokugqibela, ndifuna ukubuya ndisuka kwiindawo eziphakamileyo zentanda-bulumko ukuya kwihlabathi elimnyama lamafanasini onqulo. Ndibhale inqaku lam ndilandela amazwi omlingane wakho uRabbi Levinstein, owabagxothayo aba bantu balungileyo kwaye wababuhlungu. Ekupheleni kosuku umbuzo osebenzayo onomdla kum, kwaye andifumananga isalathiso esithe ngqo nesifanelekileyo kwimpendulo yakho (kwaye ndiyathemba ukuba isalathiso esinjalo), kukuba kukho indlela yokuvumela amafanasini enkolo aphile kwaye aqale. iintsapho kwiindawo zonqulo zamaZiyoni. Emva kokuba kufike abantu abangaxoki kwindoda, oku kumbono wam othobekileyo ngumbuzo wentlalontle kunokuba i-halakhic. Apha, ngokombono wam, wena, mna, kunye nabo bonke abafundi bethu kufuneka sikhumbule intetho yomlingane wakho, u-Albert Einstein: "Kulula ukukrazula i-opaque kunokuqhekeza ucalucalulo."
Nantsi indlela endisabela ngayo kumazwi akhe:
UProf. Yuval othandekayo, Molo.
Okokuqala ngembeko yam niwonwabele iinumbers zam waze wavakalisa umbulelo wenu apha. Ngokuqinisekileyo akululanga kum.
Eneneni, andizange ndivumelane naloo nto ubuyithetha kweli nqaku, nangona ndingenakutsho ukuba andizange ndiyithande. Njengesiqhelo, izinto zibhalwe kakuhle kwaye ngendlela ecacileyo nentle. Nangona kunjalo, njengoko kuchaziwe, nasemva kokuba "umda wokuphucula" (njengoko ubeka), andivumelani nabo, kwaye ndiya kuzama ukucacisa apha ukuba kutheni.
Ukuba sivumelana neFoucault (ndithetha inqaku lesibini), ngoko sifikelele kwisigqibo sokuqala esiqhelekileyo sokuba i-psychiatry igcwele iingcamango zexabiso kwaye isekelwe kakhulu kubo. Ikwanayo nomgangatho wobunyani ngokuqinisekileyo, kodwa umgca osezantsi phantse usoloko ubandakanya ixabiso kunye nemibuzo yenkcubeko.
Ngesibakala sokuba uvumile ukuba oku kunjalo, andiboni ukuba ubanga njani ukuba ubudlelwane phakathi korabhi kunye nogqirha wengqondo buxhomekeke kumzekelo wobudlelwane phakathi kwengcali kunye norabhi. Nokuba i-psychiatry ayiboni njengokutenxa, usavuma ukuba sisindululo sexabiso. Ngoko kutheni urabhi efanele akwamkele oku njengozimiselo lobungcali? Ngokuqinisekileyo unokwenza isigqibo sokuba uyayifumana, kodwa sisigqibo sakhe se-halakhic kwaye asinanto yakwenza namandla obugcisa. Ngokuphathelele imodeli yorabhi ngokuchasene nengcali, sele ubhekiselele kum kwimpendulo yam yokuqala Kwinqaku endilinikele kulo mbandela Emini emaqanda m.
Wongeze kwakhona ukuba ayinakuthintelwa (ukuba ingqondo iya kuxuba amaxabiso kunye nezibakala). Nangona ndingeyoncutshe, ndisenokuthi andivumelani nayo. Ndilungise ukuba ndiphosakele, kodwa i-psychiatry yayinokuthi igxininise kwiinyani (kwindlela ebanzi, okt kubandakanywa neethiyori ezichazayo, njengezenzululwazi zendalo), kwaye akukho nto. Umzekelo, wayenokwaneliswa rhoqo ukuba yintoni imvelaphi yobufanasini (kum oku kubandakanya uqikelelo lwasendle lwengqondo yengqondo njengoko unqwenela, okoko nje ezi ziithiyori ezizama ukuchaza into ngokwayo ngaphandle kwentlawulo yexabiso), njani iphuhlisa (ibid.), Apho ixhaphakile, nokuba kwaye njani Oku kungatshintshwa, kwaye yintoni ixabiso lalo naluphi na uhlobo lotshintsho (okanye "ukuguqulwa" kungekhona kuthi) okunjalo kunye nokunye. Le yimibuzo ejongene neenyani kunye nokutolikwa kwazo, kwaye ke ngoko iyimibuzo esemthethweni yenzululwazi kunye nobungcali. Kubonakala kum ukuba yonke le mibuzo ayihlawuliswa nayiphi na intlawulo yexabiso. Kwelinye icala, umbuzo wokuba ngaba kukutenxa okanye akunjalo, mawuyekelwe eluntwini nakubantu bonke abakulo ukuba bagqibe.
Ewe, ukuba nawe wenze ingqikelelo "yokutenxa" inyani yam, njengokutenxa kwisiqhelo samanani ("inkcazo yezibalo engathathi hlangothi", ngolwimi lwakho) ke i-psychiatry inokumisela oku ngobuchwephesha, kodwa sele uvumile kumanqaku akho apha ukuba. akunjalo. Kwelinye icala, ubuyela apha kwaye ulungise ukuba luncedo kwam kwigama lokutenxa, kwaye ndicinga ukuba ngokwenza njalo uzama ukumisela inkcazo yengqondo yokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwizithili zethu ukutenxa kunamandla (okuzalwa?) Ukuthambekela kwisenzo solwaphulo-mthetho (njengomzekelo we-kleptomania esivumelene ngayo, ngaphandle kwegama elithi "ukutenxa"). Enye indlela okanye enye, le yinkcazo, yingakho uRabbi Levinstein kunye nomncinci wam (okude kakhulu kwiimbono zakhe kwizinto ezininzi) uyavuma ukuba akukho ndawo yokuthatha igunya lobuchwephesha phezu kwayo. Uthini umxholo wekhonkrithi wale ngcamango, kwaye ingaba ibandakanya ubufanasini, mna ngokobuqu ndityekele ekucingeni (kuba ngokombono wam ukutenxa kukutyekela kwisenzo sokuziphatha okubi, kwaye hayi utyekelo lomsebenzi wolwaphulo-mthetho ngokwenkolo). Ndicinga ukuba imbono kaRabhi uLevinstein ngu-ewe (kuba ngokombono wakhe utyekelo lomsebenzi wolwaphulo-mthetho kwingqiqo yonqulo lukwanxamnye, mhlawumbi ngenxa yokuba uchonga i-halakhah ngokuziphatha, endiyigatyayo kakhulu kwaye ngaloo ndlela ndijoyine i-tangle kade).
Umgca osezantsi, andiboni sizathu ehlabathini sokuba i-American Psychiatric Association okanye nayiphi na enye imibutho yobuchwephesha ukuba inqume sonke ukuba yintoni efanele ukuphathwa kwaye yintoni engafanelekiyo, kwaye yintoni ukutenxa kwaye yintoni engafanelekiyo. Oku kufuneka kushiywe kuluntu, kumntu ngamnye kuye, kwaye ngokuqinisekileyo nakwingcali yengqondo yakhe (ngokuchaseneyo nombutho wabo wobugcisa). Oko kukuthi: uluntu luya kugqiba ukuba kukho into eyingozi kwabanye (i-kleptomania, i-pedophilia, njl.), Kwaye ke kufuneka iphathwe nangona isigulane asizange sibonakalise umnqweno walo (kwiimeko ezigqithisileyo ngokwaneleyo). Kwiimeko apho kungekho nzakalo kwintlalontle, umntu ngokwakhe uya kuthatha isigqibo sokuba ngaba ufuna / ufuna unyango okanye cha. Kwaye ngokuqinisekileyo ugqirha wengqondo aphendukela kuye (kwaye kungekhona umbutho) unokuthi akafuni ukuwuphatha lo mbandela ngenxa yemilinganiselo yakhe. Kuyo nayiphi na imeko, andiyiboni indawo yezigqibo ezidibeneyo zombutho weengcali kwimiba enjalo.
Ndicinga ukuba lo mfanekiso ukwacacisa ukuba kutheni ngokombono wam kukho ngokuqinisekileyo kwaye kukuphunyuka ekungeniseni imilinganiselo yexabiso kwi-psychiatry. Ngokona kuqonda kwam kule modeli siyayinqanda le nto, ngokoluvo lwam ugqirha wengqondo ngokuqinisekileyo unokwenza umahluko phakathi kwezinto ezixabisekileyo kunye neenyani, njengengcali yefiziksi okanye intanda-bulumko. Nanjengoko ndingeyoncutshe, andithandabuzi ukuba kuyenzeka impazamo kula mazwi, kwaye ndingavuya xa unokundilungisa.
Kukwanjalo ke nangesimo somntu olele kwigumbi labagula kakhulu xa intliziyo yakhe ibetha nengqondo yakhe iyekile ukusebenza. Abachasi ngokombono wam, ngubani emehlweni am angalunganga kwaye ayingozi, "abanalwazi," ngamazwi akho. Emva kwayo yonke loo nto, ezi azikho iinyani okanye ulwazi lwalo naluphi na uhlobo, kwaye ke ndichasene nokusetyenziswa kweli gama ngokubhekiselele kubo. Ngokombono wam baziphatha kakubi kwaye yiyo loo nto beyingozi. Kwakhona, kubaluleke kakhulu kum ukuba ndilumke ngokwahlula phakathi kwamaxabiso kunye neenyani. Ngokuchanekileyo ngenxa yesi sizathu ugqirha akanalo ixabiso elongezelelweyo ngokumalunga nalo mbuzo.
Le nto uyikhankanyileyo kwiintetho zakho apha ukuba xa kusenziwa le ngxelo inikezelwa koogqirha ayiyonto ngaphandle kwegqiza legunya, kwaye akukho nto ingaphaya. Oku akusiyo ukuzimisela kobugcisa. Musa ukuxuba amaxabiso kunye neenyani kwakhona. Ngokwenyani nikezela ngesigqibo sokumisela ukufa koogqirha (njengoko uchaze ngawe kumnqwazi wakho njengogqirha), kodwa oko akuthethi ukuba sisigqibo sobunyani. Oku kwenzelwa ukuba kube lula kunye nokusebenza kakuhle kuphela, kwaye ngokwenene kukwabela amagunya endlu yowiso-mthetho kugqirha kuphela ukucutha kunye nokulungelelanisa inkqubo.Ukumisela ukufa, nangona kukuzimisela kwexabiso). Ukugqiba ukuba yeyiphi imisebenzi loo mntu anayo kwimeko enjalo kwaye yintoni na amathuba akhe okubuyela ebomini sisigqibo sobugcisa. Isigqibo sokuba kwimeko enjalo uthathwa njengofileyo - sisigqibo esisulungekileyo. Akananto yakwenza nezibakala. Ngokuchasene noko ubhalileyo, isigqibo se-halakhic malunga nobomi nokufa "asifani nesigqibo sonyango." Nciniba ukuba akukho nto "isigqibo sonyango" malunga nobomi okanye ukufa. Esi sisigqibo sexabiso elisulungekileyo (njengoko kuchaziwe ngasentla). Kuyinyani ngokwenene ukuba isigqibo esisemthethweni sinokwahluka kwi-halakhic, kuba ezi zimbini zimbini iindidi eziqhelekileyo (kunokuba ziyinyani).
Sivuma ngokupheleleyo ukuba amafanasini ayizozaphuli-mthetho. Kodwa ngokuqinisekileyo asivumi ukuba amafanasini (asebenzisa ngokoqobo utyekelo lwawo) akazozaphuli-mthetho. Siyavuma ukuba izenzo zabo azilolwaphulo-mthetho, oko kukuthi, ulwaphulo-mthetho lokuziphatha (ndakhankanya ukuba kukho abo bakwinkampu yonqulo abacinga ngenye indlela, andinguye omnye wabo), ekubeni bengabenzakalisi abanye. Kodwa i-halakhic kunye neTorah zizigebenga, ngoko ke ngokwembono yenkolo kunye ne-halakhic ziyizigebengu ngendlela efanayo yombulali okanye umphangi (kodwa nazo zinobugebengu bokuziphatha). Iqondo lokuba netyala ngomnye umcimbi ngokuqinisekileyo. Kulapho iqondo lokuzikhethela kunye nolawulo abanalo lingena khona kunye neqondo lokuqonda ukuba oku kuthintelo (umntu welizwe akayikugqala esi senzo esingekho mthethweni ngokuqinisekileyo). Kanye njenge-kleptomaniac phambi kwesela eliqhelekileyo.
Kubalulekile kum ukuba ndiqaphele ukuba malunga nokuphathwa kwamafanasini, ndikhululekile ngakumbi kunokuba ubulindele ukuba ndibe. Kum, kwanabo bawuqondayo lo mcimbi banelungelo lempatho eqhelekileyo eluntwini (ngaphandle kokuba uyawatshangatshangisa aze ashumayele kuwo, nto leyo iyintshumayelo yoburhelemnqa ngokomthetho). Umntu osisaphuli-mthetho kwindawo yakhe yobuqu nangasese ulilungu elisemthethweni ekuhlaleni, ngakumbi ukuba ukwimeko ekunzima ukujamelana nayo. Ndibhale ngale nto kakhulu kwixesha elidlulileyo, kwaye wamkelekile ukuba ubone umzekelo Apha kwaye kwakhona Apha. Uzibuze ukuba kutheni izinto zingaveli kwimpendulo yam kweli phephandaba, oku kungenxa yokuba ndihlomle apho kuphela kwiingxoxo oziphakamisile kwinqaku lakho hayi kumxholo walo mbandela. Ukuba ubona isiqalo sempendulo yam ende kwikholamu eyangaphambili Indawo yam, uya kufumanisa ukuba ndibhale ngokucacileyo ukuba ndivumelana noninzi lwezigqibo zakho ezisebenzayo. Ngelishwa inkqubo ayizange indivumele ukuba andise impendulo kwiphephandaba. Yiyo loo nto ndenze "uphuculo oluthile" kwiikholamu ezimbini zokugqibela apha kwisiza nakwingxoxo eyalandelayo (kwiincoko).
Kwaye ndiya kugqiba nge-mimara oyicaphule ngokuthi "umlingane wam", njengoko uyibeka (ndineentloni zokukhankanya igama lam ngesinye isigebenga sesayensi). Kunzima ngokwenene ukutshintsha okanye ukuphelisa ucalucalulo. Kodwa umbuzo omkhulu kukuba ngaba kwimeko ye-Didan oku ngokwenene kukucalucalulo, okanye ukuba yindawo yexabiso eyahlukileyo (indawo nganye yexabiso, kuquka neyakho kwaye ngokuqinisekileyo yam, i-prejudice ngengqiqo). I-taboo kunye nesimo sengqondo sentlalo kuluntu lwezenkolo malunga nobufanasini (ekuthi ngokokubona kwam akunanto yakwenza nothintelo, kuba izithintelo kwimisebenzi yezandla ngeShabbat azikho qatha kangako kwaye azilufumani olo nyango) ngokwenene lucalucalulo ngokoluvo lwam (kuba. Ingqikelelo eziyinyani zenziwe, hayi nje amaxabiso). Kodwa imbono kanye yobufanasini njengento ethintelwayo ayilona ucalucalulo kodwa isiqhelo se-halakhic (nangona ilishwa kwimbono yam). Isimo sengqondo kwimimiselo enjalo (njengayo nayiphi na isiqhelo) ngokuqinisekileyo ixhomekeke kwiinkolelo zethu ngamnye. Mna ngokwam ndinokholo kumniki weTorah, ukuba ukuba uyala, mhlawumbi kukho into eyingxaki malunga nayo (eyakuthi kwintlupheko yam andizange ndiyiphawule). Ndiwuthobela umyalelo wakhe. Kodwa ekubeni le yimibuzo yokholo, andifuni ukuba abezengqondo bathathe izikhundla, kwaye ngokuqinisekileyo bangaqinisekanga, malunga nabo (njengokuba kwenzeka ntoni kumthendeleko emilonyeni yabazala bethu bamaKatolika), kwaye sibuyela kwakhona ukwenzeka kunye nesidingo sokuqhawula i-psychiatry kuluhlu. Malunga noku oorabhi bethu sele betshilo (ibid., Ibid.): “Nikelani kuKesare into kaKesare…
 Ndimele nditsho ukuba kunye namanqaku amabini kaYowav Sorek, enye epapashwe kwi-supplement efanayo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kunye naleyo ipapashwe kwi-website ye-Shabbat supplement (p. Bona), le yeyona ngxoxo ikrelekrele kwaye ifanelekileyo eyaziwa kum kushicilelo okanye kwaphela ngalo mbandela. Ngembeko yam, ukuthatha inxaxheba kuyo.
Ekutenxeni, ubuNgcali kunye neeNqobo zeMgangatho-Impendulo kwinqaku likaProf. Yoram Yuval, "Abaphambuki", Shabbat P. P. Akev Supplement (Kholamu 25)
'Hefza' yeTorah - impendulo kwinqaku likaRabbi Yehuda Rak
I-Halacha kunye nenyani - yintoni na ubuchule be-halakhic
→ Isithuba sangaphambili
Iposti elandelayo ←
Iingcinga ze-8 malunga ne "Ukutenxa, ubuNgcali kunye neeNqobo - Impendulo kwinqaku likaProf. Yoram Yuval," Abaphambuki ", uShabbat P. P. Akef - iKholamu yokuQhubeka (iKholamu 26)"
30 Tishrei 10 - 2016/12/31 ngo XNUMX:XNUMX
Okokuqala, ndingathanda ukuphawula ukuba ndandiyonwabele kakhulu imbalelwano kunye nentetho, ubunzulu bayo kunye nezigqibo enivumelana ngazo nobabini ngokomgaqo.
Nangona kunjalo, awuziva ukuba ndiyasiqonda isizathu sokuba unyanzelise ekuchazeni ukutenxa njengotyekelo lobunjubaqa hayi nje ukutenxa kwisiqhelo? Iqondo lokutenxa kwisiqhelo elifuna ungenelelo okanye unyango luxabisekile ngokwenene, kodwa kwa kanye ukutenxa kwesiqhelo kusemthethweni.
Ndiyaxolisa ngokubuyisela uFoucault kwintetho, kodwa kwi-Madness of the Age of Reason, uFoucault uphendule kanye loo nto kwaye ndiyaqonda ukuba siya kufikelela kwizigqibo ezifanayo kunye nomxholo ofanayo wokwahlula phakathi kweenyaniso (ukutenxa kakhulu kwijika eliqhelekileyo) kunye namaxabiso (sonke siyatenxa Okanye ukwenza ikhathalogu kubalulekile)
Akukho mqobo ekuchazeni ukutenxa ngolu hlobo. Iinkcazo ngumcimbi kuwe. Kodwa ndicinga ukuba le ayisiyiyo inkcazo eyamkelekileyo kwaye ngokuqinisekileyo ayisiyiyo le nto uRabbi Levinstein wayeyifuna kwaye siyixoxa apha. Ke ngoko, thina (uYoram Yuval kunye nam) savumelana ukuba singayichazi ngendlela yezibalo nengathathi hlangothi. Kusetyenziso lwemihla ngemihla "ukutenxa" libinzana elinentsingiselo ecacileyo engalunganga. Ngokwengcebiso yakho, uRabi uLevinstein uthethe nje into engenamsebenzi kwaye engenaxabiso, kutheni kufuneka uxoxe ngayo?! Akukho kuphikisana ukuba ubufanasini bokwenene bubonakalisa iqaqobana labantu. Ingxoxo-mpikiswano (kunye noRabbi Levinstein) imalunga nonyango olululo (nalapha noYuval kwaye ndiyavuma, ngaphandle kwesigama kunye nokufaneleka kwegunya lobuchwephesha kwingxoxo). Enye indlela okanye enye, zonke iingxoxo-mpikiswano apha zikwixabiso lendiza kwaye ayisiyiyo eyenyani-yezibalo.
Khange ndiyiqonde inkcazo yakho ngeFoucault. Emva koko, thina ngokwethu sibuyisele iFoucault kwintetho (emva kokuvumelana nesimo sengqondo esibi ngokubanzi malunga nayo), kuba apha unyanisile ngokwenene (iwotshi emileyo, njl.). Sobabini savumelana nengxelo kaFoucault (kwincwadi oyikhankanyileyo) ukuba ukuxilongwa kwengqondo kusekelwe kwixabiso kunye neengcinga zenkcubeko. Kodwa ndicinga ukuba yiyo kanye loo nto ugqirha wengqondo engakwazi ukunxiba umnqwazi wakhe wobuchwephesha kwingxabano apha (kuba ezi zixabiso kwaye aziyonyani).
Oku (kwaye oku kuphela) yingxoxo-mpikiswano phakathi kwethu ngoku. Ingxoxo efanayo ngokupheleleyo malunga nokufaneleka kwegunya lobuchwephesha bogqirha malunga nokumisela umzuzu wokufa. Kodwa le yingxoxo efanayo ngokwayo.
Ingxaki yokuziphatha nayo yonke imiqathango yokulalana, kukuba umntu akoni nje kuphela kodwa uyanceda kwaye womeleze iqabane lakhe kwisenzo sobubi.
Xa ubudlelwane obungavumelekanga bubekwe kwiziko kwaye bubonakala kwabaninzi ngaphandle kwehlazo - ngoko umlinganiselo womzekelo ongalunganga wongezwa kuninzi kunye nengxelo yoluntu ukuba oku kuvunyelwe, inkcazo enefuthe elitshabalalisayo kumakhwenkwe asele ekwimeko. amathandabuzo, kwaye umzekelo ombi unokuphazamisa isalelo.
Wonke uSirayeli udibene, kwaye izenzo zomntu ngamnye zineempembelelo kuwo wonke umthetho. Ngamana sonke singaba nelungelo lokungcwaliswa size siphuculwe ngamnye komnye kwinto afuna ukuyiphucula, size ngaloo ndlela silawule ihlabathi lonke ngokufanelekileyo.
Ngokuzithoba, S.C. Levinger
Ngokwenjenjalo uye wajika nasiphi na isithintelo salo naluphi na uhlobo sibe sisenzo sokuziphatha okubi. Ngapha koko, ngokutsho komzekeliso womngxuma enqanaweni, kwanezono ezingabandakanyi omnye umntu zichaphazela ikamva lakhe. Ke ngokwale nto yonke iTorah kukuziphatha.
Ukuba awuchazi ukuba isalelo ngokwaso sinokuziphatha, akukho ngqiqweni ukuthetha ngayo ngokuziphatha ngenxa yokusilela kunye nokwenzakala. Le yitautology yezizwe.
30 Tishrei 10 - 2016/12/34 ngo XNUMX:XNUMX
Kwi-SD XNUMX Elul XNUMX
KuRabi uAvraham Neru-Molo,
Eneneni, zonke izigqitho ezichasene nokuthanda kukaThixo kukuziphatha okubi, oko kusityala imbeko kuMdali, ekubeni ‘ngumninindlu’ ehlabathini lonke, nakumbulelo ngalo lonke ubabalo lwakhe analo nathi.
Kwangaxeshanye, izithintelo ezininzi zokuzalana, ezisiphakamisayo ekwakhiweni kobomi bentsapho obunempilo, azilawulwa nje ngethuku, kodwa ziinqobo zothando, ukunyaniseka nobubele, ngenxa yokuba utata nomama baxhamla omnye komnye kwaye batyala ngokungenasiphelo. uthando kunye nokuzinikela.
Kodwa ngaphandle kozuko loMdali, kukwakho nembopheleleko esisiseko yokuhlonela abazali. Kungakanani ukuphelelwa lithemba okubangelwa ngabazali xa umntwana wabo esiwa kubomi obusisithintelo esiqatha, ubomi apho kungekho thuba lokuseka ‘Isizukulwana Esisikelelekileyo’ esiya kuqhubeka nendlela yobuYuda?
Umntu owaziyo ukuba abazali bakhe batyale imali engakanani kuye nokuba banikele ngobomi babo kangakanani na ukuze bamzise emhlabeni ukuze bamkhulise baze bamfundise - unyanzelekile ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuphuma apho awe khona.
Kanye njengokuba abazali bahlala behamba kunyango olunzima, emzimbeni nasengqondweni, ukuba babe nelungelo lokumanga umntwana, kwaye ukuba abaphumeleli kolu nyango, zama olunye unyango, kwaye unganikezeli - ngoku kuxhomekeke kumntwana. owayenemali efanayo yokutyala imali kubazali bakhe. Obu buncinane anokubabuyisela ngako konke ububele babo ngakuye.
Nabanyangi abangaqinisekanga ukuba umntu unokutshintsha, bathi kukho impumelelo. Naxa utyekelo lobufanasini lunamandla kwaye lwahlukile, nto leyo ke kunzima kakhulu ukuyitshintsha - uthi uGqr Zvi Mozes (kwinqaku lakhe, 'Ngaba Unyango lokubuyisela uTshintsho ngokwasengqondweni', kwiwebhusayithi ye'Root'), ukuba abantu kakhulu uzimisele kwaye ube nokholo olomeleleyo, unokuqalisa usapho, ngoncedo lokhathalelo olufanelekileyo lobuchwephesha.
Ukukhulisa umntwana umntwana wabanye abantu, ngaphandle kokuyicombulula ingxaki yokwalelwa, kubandakanya intlungu kubazali athatyathwe kubo umntwana. Ukwandisa imfuno yokukhuliswa komntwana kubantu besini esifanayo ngokuqinisekileyo kuya kukhokelela kutyekelo lweenkonzo zentlalo-ntle ukwandisa 'isibonelelo' ngokusebenzisa ngokugqithiseleyo ukukhulisa umntwana endaweni yokuzabalazela ukushiya umntwana ezandleni zabazali bakhe.
Ingakumbi 'njenge-surrogacy' kukuxhaphaza iintlungu ezimanyumnyezi zeentsapho. Akukho mfazi onengqiqo uya kudlula ekubandezelekeni kokukhulelwa nokubeletha, ukwenzela ukuba umntwana anikwe abantu abangabaziyo, kodwa kunoko ukwimeko embi yemali okanye yengqondo, kwaye ngubani owaziyo ukuba imibutho yolwaphulo-mthetho kunye noorhulumente abakhohlakeleyo ababandakanyekanga?
Njengoko ndibhalile, konke oku kunokuba yinyani kwaye kunjalo ingxabano engabalulekanga kwingxoxo. Umbuzo ngowokuba yintoni uhlobo lwezithintelo ngokwazo, kwaye hayi ukuba kukho imiba yokuziphatha encedisayo.
Ngaphandle koko kukho amanqaku athile kumzimba wezinto:
NguMdali owadala umntu enotyekelo lwakhe. Andiqinisekanga ukuba ndibona imfanelo yokuziphatha emntwini ukuyitshintsha loo nto.
2. Ukukhathazeka kwabazali kunokubakho, kodwa kunokubakho iimeko apho kungabikho. Kuthiweni ke ngoko? UAzla umsebenzi wakhe wokuziphatha? Ngaphaya koko, nangona ndingakhange ndijonge kodwa ndicinga ukuba kukho izibini ezinjalo ezikhulisa abantwana abagada amangcwaba. Ndicinga ukuba "akukho thuba" libinzana elinamandla kakhulu.
3. Umntu akazange "awe" kodwa "wabanjwa."
4. Zonke ezi ngxabano zithetha ngomsebenzi wokutshintsha (ukuba kunokwenzeka), kodwa ungabonakali ingxaki yokuziphatha kwisenzo kanye.
5. Akunyanzelekanga ukuba umntu atshintshe indlela aphila ngayo kuba ikhathaza abazali bakhe. Kuyaziwa kwiRiki ecatshulwe kwiRama Yod ukuba unyana akanyanzelekanga ukuba athobele abazali bakhe ekukhetheni iqabane, kwaye ndandisa oku kumanqaku am ngokuhlonipha abazali.
6. Kukho iitheraphisti ezininzi ezichaza ukungaphumeleli kunye nomonakalo ombi. Khange ndingene kumbuzo wokuba ngaba unyango alunakusebenza, kodwa niyichaze imeko ngendlela eyothusayo. Imfuneko yokuba umntu abeke esichengeni esinjalo ifanele ibe kwisiseko esinamandla kakhulu. Kwaye kwakhona, kwinqanaba lenkolo ngokuqinisekileyo kukho imfuneko enjalo, kodwa ukuyibona njengesibophelelo sokuziphatha ndiyathandabuza kakhulu. Akukho mbulelo unyanzelela umntu ukuba angene ekubandezelekeni okubi kangaka nakwiingozi zengqondo. Ukuba abazali baya kungena kwiindlela zonyango eziguqukayo eziza kutshintsha iingqondo zabo kwaye zikhuphe ukukhungatheka, kulula kakhulu kwaye kunqweneleka ngakumbi (ukuziphatha, kungekhona i-halakhic).
7. Izimvo zokugqibela ziyinkcazelo ecalanye kakhulu nenomkhethe (kwaye ndisebenzisa ulwimi oluthambileyo kakhulu). Kucacile kuwe ukuba ubungachaswanga nyani kwaye kule meko ubungayi kuyibona ngolo hlobo. I-surrogacy sisivumelwano phakathi kwabantu abadala. Kwaye nantoni na evela kuyo, umntu kufuneka azame kwaye ayithintele. Ayilibazisi isenzo ngokwayo. Ukunikela ngesisa kunokubangela ukuba abantu baphelelwe yimali kwaye banokuba. Kuthiwa uYigal Amir wayenenkolelo yonqulo eyayinokukhokelela ekubulaweni kwabantu nakwizenzo eziqatha. Ngaba kungenxa yoko le nto inkolo yonqulo ifanele iyekwe?
Njengomthetho, xa uphakamisa zonke iintlobo zeengxabano kwaye ngenxa yesizathu esithile wonke umntu ukuya kwinqanaba lokugqibela kwicala elifanayo, ndiyakrokrela kwaye ndiphinde ndihlolisise isigwebo sam.
Ngaphandle kokungena kwingxoxo ecacileyo yazo zonke iingongoma oziphakamisile - ndiza kwenza inkcazo enye kuphela malunga neengozi ezixutyushwa kunyango lokuguqulwa.
Okokuqala, ubani ufanele aqonde ukuba ayilulo lonke unyango olunikelwayo olufanelekileyo, yaye kukho unyango olusenokuba lufanelekile kumntu othile nolunokuba yingozi komnye, kanye njengeziyobisi, apho into encedayo inokuzisa omnye kumasango okufa, njengamayeza yonke into kufuneka yenziwe yenye ingcali yesayikholoji yengqondo Ukuxilongwa ngokucokisekileyo kunye nohlengahlengiso olucokisekileyo lwendlela yonyango emntwini.
Kwaye okwesibini, umntu kufuneka aqonde ukuba isayensi iyaphuthaza ebumnyameni xa kufikwa kuwo wonke umba wobufanasini (ngendlela, inxalenye enkulu yobumnyama ngokuzithandela, ivala ngengqondo nayiphi na inzame yokufumana indlela yokuphuma, kuba amava kakhulu luqhekeko kunye semthethweni yesazisi ubufanasini).
Omnye wemingcipheko emikhulu ebalelwa kumalinge okuphilisa luloyiko lokuphelelwa lithemba ngokupheleleyo ngenxa yokusilela kwemizamo yonyango. Nangona kunjalo, xa usazi kwangaphambili ukuba ezi zonyango ezintsha kunye novavanyo-inqanaba lokulindela liphakathi kakhulu, kwaye ngokufanelekileyo ukuphoxeka kokusilela akuwisi umntu. Kwaye uqonde ukuba into engazange 'ihambe' okwangoku ngolu hlobo, inokuphumelela ngomso ngendlela eyahlukileyo, 'kwaye ukuba akunjalo ngomso ke kusuku olulandelayo' 🙂
Kwelinye icala, kufuneka siqale kwasekuqaleni kwenkolelo yokuba uThixo ubeke umngeni omkhulu eluntwini ukuze kufumaneke iyeza lokunyanga olu tyekelo luchasene neTorah. Kwelinye icala, ukwazi ukuba indlela inde yaye asikafumani sisombululo sicacileyo.
Oku kunjalo kuzo zonke iingxaki zoluntu, xa kuzanywa ukufumana unyango - oluphambili. Ngamanye amaxesha kudlula amashumi eminyaka, ngamanye amaxesha amakhulu, kwaye nangaphezulu, ukanti ungaphelelwa lithemba kwaye unde kwaye uqhubeke ukhangela macala onke, de ngequbuliso kufike impumelelo.
Okokuqala, ezi ziingxelo ezivela kwiingcali zengqondo.
Okwesibini, okoko bengalufumani unyango kwaye yonke into igcwele inkungu njengoko utshoyo, ulindele ntoni endodeni? Ukuziphatha kwaye ungabi yi-gay ngaphandle konyango olusebenzayo?
A. Khangela izicombululo.
Ukubonisana neengcali nokufunda uncwadi lobuchwephesha, kunokuzisa ulwazi olutsha ngobuntu bakhe noonobangela bengxaki yakhe, anokuthi kuzo azifumanele izicombululo ezitsha eyedwa, mhlawumbi kwanamacebiso angazange acinge ngawo iingcali.
B. Yenza ubunzima bube ngumngeni.
Kanye njengokuba abantu bekonwabela ukuzama ukuqhekeza umba ongacacanga kwi-Gemara okanye kwi-'Edges'. Apha lo mfo wafumana umngeni onomdla - ukuqhekeza iqhina lobomi bakhe. Zibuze ukuba yintoni evuselela uthando kunye neminqweno yakhe kwaye yintoni ezolileyo? Chaza ziziphi iimpawu ezibangela ukuba athande oontanga bakhe? Kwaye mhlawumbi kukwakho ibhinqa elineempawu ezinjalo ezinokuthi kwakhona luvuse uthando lwakhe kwaye kamva mhlawumbi lude luthomalalise ukudodobala komtsalane wesini 'ongaqhelekanga'.
Isithathu. Kwakhona phuhlisa iimvakalelo ezithile zovelwano malunga 'nokuthe ngqo'
Abo bajongene namava anzima ngokungenakunyamezeleka ukuhamba esitratweni apho bahlala bedibana nabasetyhini bonke abanxibe, okanye abanganxibiyo, benzelwe ukuvuselela ithuku labo badlula kwisitrato,.
D. Ukwazi 'ukuzihlanganisa' kuyo yonke impumelelo, nokuba incinci okanye incinci.
Ukucinga indlela avuya ngayo uMdali wakhe ngayo yonke impumelelo, nakuko konke ukwala ithuku. Uya kuqala ukonwabela ukwaliwa kwethuku kwiiyure ezimbalwa; Emva kweentsuku ezimbalwa, kwaye kamva ngaphezu koko. Kanye njengokuba ithuku elingendawo livela kumaxesha ngamaxesha, liqala kancinane lize liqhubeke nokuninzi, ngoko ‘ngomlinganiselo omkhulu’ ithuku elilungileyo – liyaqhubeka de kube namhlanje!
uThixo. Ukuzibandakanya kwizinto ezinomdla.
Ukufunda, umsebenzi, umculo, umsebenzi wokuzithandela njalo njalo. Asiyiyo na le nto wasifundisa yona uFaro ukumkani waseYiputa, ukuthi, Lo msebenzi mawubazukise abantu, ungabasindisi ngobuxoki, ungafani nooRabhi bethu abasifundisayo?
kwaye. Musa ukuzika rhoqo 'kwingxaki'.
'Ingxaki' iba 'yisazisi'. Qonda ukuba wonke umntu uneminqweno yakhe kunye nokuwa, kwaye ngokuchaseneyo, 'ngomlinganiselo olungileyo wande' iincopho kunye nempumelelo iyanda. Kanye njengoko iJiphutha imalunga nokusilela, umntu kufuneka avuye amatyeli aliqela kwimpumelelo yobomi kunye nezenzo ezilungileyo, ezithe ngqo ngenxa yokuba ziza nosizi nobunzima, zixabiseke kakhulu kule ndawo.
P. 'Kuba uvuyo lukaThixo lingamandla enu'.
Okukhona umntu ebuva ubukho bukaThixo ehlabathini – kokukhona uya kuvuya ngakumbi kuye. ‘Ndahlala ndicela eNkosini phambi kwam, ngokuba andiyi kuwa ngasekunene; Ukwabelana noThixo ngazo zonke iintshukumo zobomi, ekuvumeni konke okulungileyo nokucela okulahlekileyo, kumntu ngokwakhe kunye noluntu lonke. Xa usondela ebomini ngovuyo kunye nokukhanya - uphonsa yonke imiqobo.
Ezi zezinye zezinto ezisisiseko zokuhlangabezana nobugorha, yaye ngokuqinisekileyo nabani na unokufumana kumava akhe namava abanye icebiso elilunge ngakumbi, ‘Izilumko nezilumko mazazi ngakumbi’.
Ndiyabulisa. Andivumelananga nesigwebo esinye sakho. Kodwa njengoko ndaqala ukusabela kubo (ukuxuba okuphindaphindiweyo phakathi kokuziphatha kunye ne-halakhah, ingcamango egqwetheke ngokupheleleyo yokuziphatha, njalo njalo njalo), ndaqonda ukuba oku kwakungekho ukungavumelani. Izinto zimanyumnyezi nje. Ukuba uya kundivumela, ndicinga ukuba ibali elilandelayo, endakha ndaliva kuRabbi Shalom Shevdron, lenza ingongoma icace kakhulu. Uthi wakha wabona inkwenkwe eyawa estratweni yenzakala, yamphakamisa yaza yabaleka ukuya esibhedlele. Kuyo yonke loo ndlela, abantu ababevela ezifestileni nabadlulayo babemkhwaza besithi, “Rabbi Shalom, amayeza apheleleyo” (ngesiYiddish, kunjalo). Kwaye ke wabaleka wabaleka kwaye wonke umntu wayenqwenela. Emva kwemizuzu embalwa ubona phambi kwakhe ibhinqa elihamba lisiya kuye limgama kwaye ngokuqinisekileyo naye wamkhwaza, njengabo bonke abantu, "Rabbi Shalom, philisa ngokupheleleyo." Ecothoza wasondela kuye kwaye nelizwi lakhe liye lehla kancinci. Ekugqibeleni xa ekugqibeleni wabona ukuba ngubani (= unyana wakhe, kunjalo) waqala ukukhala ngokothuka. Ngeli xesha iminqweno kunye neengcebiso zakhe zaphela. Kwinguqulelo yasimahla: Ndakhe ndayibona indoda ihlupheka ubomi bayo bonke ngenxa yokukhubazeka kokuzalwa. Kubo bonke ubomi bakhe njengoko wayehamba kakhulu phantsi komthwalo wakhe wonke umntu wathi kuye, “Kufuneka wenze ubunzima bube lucelomngeni,” okanye “Fumana ukuqonda ngobuntu bakho.” Abanye bade bamnike iingcebiso zamahhala: "Ukusuka kubunzima kuya kwakhiwa." Ucatshulwe esithi "Finals from villages". Yongeza kuyo "yazi indlela yokuzincoma ngayo yonke impumelelo, nokuba yinxenye." Abanye baye bade bamazise: "Imvakalelo yokuba nosizi kuthi ukuba asihlupheki kwaye asizange sihlupheke kwiintlungu zeesuphu" (= yintoni emnandi onayo!). Okanye "Zibandakanye kwizinto ezinomdla, endaweni yokuhlala ucwina ingxaki." Kwaye, ngokuqinisekileyo, "uvuyo lukaThixo lunamandla." UMehadrin waseMehadrin wayenokongeza apha: “Kuyinyaniso ukuba, phantse akukho mntu uphumelela ngokwenene, kodwa ndivile ukuba kwimithamo yolwandle kukho abo bathabatha amakhulu egolide kwimivuzo yabo kunye nezigulana (ukuba banikwe intlonipho yokwenene, ngokuqinisekileyo kwaye baya kuphumelela. ukuba baye kwiingcali zokwenyani kunjalo) ewe baphumelele. UThixo makancede uRabhi Shalom.” Andiqinisekanga ukuba ubunokuziva njani ukuba ubukwimeko enje umntu ebenokukuphathela onke la macebiso alungileyo. Ndiyazi ukuba ndingaziva njani. Ugqibile kwaye wathi wonke umntu unokufumana iingcebiso ezilungileyo ngakumbi kumava akhe. Ndikuxelela kuphela iingcebiso ezilungileyo endizithatha kumava am ngokubhekiselele kwimeko enjalo: ukuba into yokugqibela umntu ayifunayo iingcebiso zolu hlobo kunye nokunye. Ndicinga ukuba kuya kuba kuhle ukuba avume inyaniso kwaye athi asinakucebisa, kodwa yintoni na endiya kuyenza, kwaye uBawo osezulwini umisele phezu kwam (umthetho wonqulo nokuziphatha okubi).
Kungenzeka ukuba amazwi kaRabhi uLevinger athethwa ngethoni ekhululekile kuba ukude nengxaki. Yena nabanye basenokungaziva njengonina waloo nyana. Oko akuthethi ukuba ayiyompendulo ichanekileyo. Emva kwayo yonke imfesane kunye nengxaki yale meko, amazwi akhe ashwankathela kakubi into elindelekileyo kwifanasini yonqulo. Ngaphezu koko, amazwi akhe ashwankathela into elindeleke ukuba wonke umYuda ayenze. Kunokwenzeka ukuba ube nenceba kuye nawuphi na umntu (inceba ngumbandela ozalanayo njengoko yaziwa kakuhle), sonke sineengxaki neenkathazo, yaye le yindlela kanye umYuda afanele aqhubane ngayo nazo.
Okokuqala, into yokuba umntu ekude nengxaki ifanele imenze asondele okanye angathethi ngendelelo enjalo okanye isilogeni.
Ndandingathethi nje ngeempendulo kodwa ndandithetha ngethoni ezithethwa ngayo. Kodwa neempendulo ngokwazo azichanekanga. Okokuqala, akukho ngxaki ngokuziphatha apha, yaye kulapho yonke ingxubusho yaqala khona. Okwesibini, uninzi lwala macebiso aluloncedo. Abanye babonisa ubunyani ngendlela ekhethayo nenomkhethe. Enye inxalenye imthuthuzela ngeentuthuzelo ezingasebenziyo. Umntu ofanayo obandezelekileyo unokugqiba isigqibo sokunqoba uKari kwaye mhlawumbi uya kuphumelela, kodwa awukwazi ukumnika isiluleko esivela kwicala uKari uya kuloyisa kwaye uvuyo lukaThixo luyinqaba yakhe. Yaye wongezelela ngokubhekele phaya kuye ukuba uziphethe kakubi kuba uyabadanisa abazali bakhe noMdali wakhe.
Ngapha koko, kusenokwenzeka ukuba akanakukwazi ukuhlangabezana nale meko, kanye njengokuba ngamnye wethu ebengayi kuphumelela kwimeko yakhe. Ndingalindela ireferensi yaloo nto ngokunjalo. Mxelele ukuba akukho nto imbi, kuba ngumsebenzi onzima kakhulu kwaye phantse akunakwenzeka. Oku endaweni yokucaphula iindinyana ezingenanto kunye neengcali ezingacacanga ezikhethiweyo kunye ne-tweezers kwaye zingamncedi (ngaphandle kokuba "ziingcali", ngokungafaniyo nazo zonke iingcali zengqondo kwihlabathi, kodwa ukuba ukholelwa kwaye uzimisele.
Ukuba ungumhlobo osondeleyo womntu onjalo kwaye unamandla okumkhuthaza kwisenzo esizimisele ngakumbi kunye nokumxhasa - kunokwenzeka. Kodwa hayi njengengcebiso yesikolo ngokubanzi yokujongana nemeko embi kangaka.
Iintetha zam zizakuvela apha kungekudala, kwaye apho kuya kucaca ngakumbi.
Ngomhla we-XNUMX ka-Elul, ngowama-XNUMX
NgoLwesine odlulileyo, uRabbi uMichael Avraham Neru wabuza "ifanele yenze ntoni le ndoda" ukuze iphume kwimeko yayo. Kwaye ndazimisela ukwenza intando yobulungisa, kwaye ndawuphendula umbuzo wakhe njengoko ndandisazi nanjengamava am.
NjengomYuda wase-NH, owathi, njengabo bonke abantu, 'zingaphi na izigigaba awazibonayo', wadlula kwiingxaki kunye namaza, amahla ndinyuka, njl.njl., njl.njl. - ndiye ndakwazi ukushwankathela iindlela zokwenza kunye nokucinga ukuba kufuneka ancede ekuhlangabezaneni neengxaki zam, yaye usenokunceda abanye bahlangabezane neengxaki zakhe.
Ndiyilibele ngokwenene enye inqaku, ethe yavela kumazwi akho, kwaye mhlawumbi yeyokuqala kwaye iphambili:
H. Gcina ukuzola kunye nokuzola kwezona meko zinzima kakhulu.
Yintoni eya kukunika kwaye yintoni eyakwenza ukuba ucaphuke? Xa usenza izinto ngenxa yonxunguphalo, ukubhideka kunye 'noxinzelelo' - uya kubandakanyeka kuphela kwaye utshone eludakeni ngakumbi nangakumbi.
Ngoko zibambe, uze uyihlolisise ngokuzolileyo imeko. Uya kufunda isifundo, kwiincwadi nakwiingcali; Kwaye akukho nto ibalulekileyo, zifundele ngokwakho: ukwazi ukuba yintoni ekwenza ube phantsi kwaye yintoni ekunyusayo? Yintoni ephazamisayo kwaye yintoni ethuthuzelayo?
Enyanisweni, oku koko kwenziwa ziingcali zengqondo kunye nabacebisi: hlala phantsi nawe kwaye wenze 'izibalo zengqondo' kunye nawe, kwaye ukusuka apho ufika kwiimbono kwiingcambu zengxaki kunye neendlela zokuyicombulula.
Uluvo lwakho malunga 'nonina womntwana', othatha imeko yonyana wakhe ngokubalulekileyo, ayicaci. Nam ndikhe ndagqabaza ngonxunguphalo lwabazali xa bejamelene nengxaki yonyana wabo, unxunguphalo olukhoyo nokuba basiyisile isikhalo sabo ezintliziyweni zabo.
Nditsho noYitzkhak, ohamba ngomyalelo kaThixo wokubopha - intliziyo yakhe ibuhlungu ngenxa yosizi lukanina owaguqula ubuso bakhe, unyana owazalwa iminyaka emashumi alithoba, waba ngumlilo nokutya, ndiyaxolisa ngonina. lilani nilile. Ngamana singasikelelwa njengoYosefu ukuba umfanekiso womzobo wabazali bethu uphakame kuthi ebudeni bovavanyo olunzima.
Okokuqala, nangona ndijongile apha kum andifumani mntu olilungisa afuna ukuwufeza umnqweno wakhe, mandixolise ngobubukhali bezinto endazibhala kwisaqhwithi sengxoxo. UMnu njengesiqhelo uthetha ngentetha nangembeko, kwaye mna ebugwenxeni bam indoda evuthuzayo.
Kum kubonakala ngathi ngasemva kukho amazwi enu awawathethayo ngokuphathelele ukuziphatha okubi kombandela endandingavumelani kakhulu nawo, yaye ashiya umzobo aze atywine kwanakwamanye amazwi akrakra awafika kamva. Ndicinga ukuba kukho icala elinye ekuboniseni izinto, kwaye wayebonakala ngathi uyahluka kakhulu kum.
Okokugqibela, kusenokuba nokwenzeka ukufumana kumazwi akho uncedo kumntu ongaqinisekanga, kodwa ndicinga ukuba kungcono ukuzibeka kwimeko eyahlukileyo, njengoko bendiphawule kuyo yonke ingxoxo.
Konke okuhle kwaye kwakhona uxolo.
Yithi kumguli :: Ulahlekile. Awunalo ithuba. Akukho sizathu sokuya esibhedlele tu. Yiya ngqo emangcwabeni.
Emva koko khalaza ngokuzibulala. Kwaye mhlawumbi abafana abalungileyo bohlobo lwakho bazisa abagulayo ukuba baphelelwe lithemba nokuzibulala?
Kukho nenye indlela. Kuyenzeka ukubanika iingcebiso ezisebenzayo (nangona kuncinci kakhulu ngelishwa, kwaye kufanelekile ukuyicacisa ngokunyanisekileyo kwaye hayi ukucakwa mhlophe), kodwa ngaphandle kwengcebiso hayi ezi ngcebiso, kwaye ngaphandle kweengxaki ezithuthuzelayo ozinike zona eziya kuthi nzulu ngakumbi ukukhungatheka ( ngelixa besomeleza uvuyo lukaThixo).
Kwaye ngokuqinisekileyo akulunganga ukupeyinta umfanekiso oqaqambileyo nongathembekiyo (ngokungathi ezi ntsilelo ziingcali zokunyanga ezingenamsebenzi, kwaye ngathi ikholwa liphumelele).
Kwaye okungaphantsi kokwenyaniso ukubachazela ukuba baziphethe kakubi ngenxa yokuba abazali babo batyale imali kubo yaye uMdali wabo ulindele kubo yaye bayasilela nje baze bakhuliselwe elukholweni lwabo. Ingaba uzimisele? Le yindlela iimbandezelo eziphendulwa ngayo ( R. Barar noYitzha AA, XNUMX)?
Kwaye nangokumalunga nombono wokuziphatha owubonisileyo. Kwaye ukuba abazali bam bafuna ndithwale ikhulu leekhilogram emqolo ubomi bam bonke kuya kufuneka ndiyenze ngenxa yombulelo? Ngaba ikho intlawulo enjalo yokuziphatha? Sele ndikukhumbuze ngoMaharik ngokukhetha iqabane. Ndikhankanya ukuba sixoxa ngokuziphatha hayi ihalakhah. Kufuneka kubekho intlawulo ye-halakhic enjalo. Kodwa ukutsho ukuba kukho intlawulo yokuziphatha? Uxolelo, lugoso nje. Ngokubanzi, ukubulela kuThixo akuyondlwan’ iyanetha, kwaye ngokokubona kwam akukokuziphatha kodwa kungokwentanda-bulumko. Bona amanqaku apha:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Kuko konke oku, kubaluleke kakhulu ukubathuthuzela ukuba nokuba bayasilela, phantse wonke umntu akanakumela nayo. Kwaye sele sifumene kwi-Ketubot Lag ukuba kungekhona kuye kuHananiya uMishayeli kunye no-Azariya amacandelo e-hook kumfoti, ogama lakhe lingumahluko phakathi kokubandezeleka okuqhubekayo kunye nokubandezeleka okukhulu kodwa kwendawo kunye nokomzuzwana.
Amagama malunga namathuba okuphumelela ngamazwi kaGqr Zvi Mozes, umlawuli weShiloh Institute, enye yeengcali eziphezulu kwicandelo lethu. Kwaye uthi ngokucacileyo ukuba kwimeko yokutshintsha ukuthambekela okucacileyo kunzima kakhulu, kodwa abantu abazimisele kakhulu kwaye banokholo olomeleleyo banokuphumelela kunye nesikhokelo esifanelekileyo sobuchule.
Ezinye iintetho zam zizinto ezicacileyo. Ngaba ucinga ukuba uRabbi Kolon wayenenjongo yokuvumela umntu ukuba atshate ukuba akhumbule? 🙂 Ngubani owavumela umntu ukuba alandele abazali bakhe esibingelelweni seminqweno yakhe? Ukuba akabaleki ebhotwe, uya kunxiba mnyama kwaye azigqume ngomnyama, njl njl. "kwaye akayi konakalisa ubomi babazali bakhe ngentlungu eyoyikekayo.
Akukho mntu usindayo kwiinkxwaleko zakhe. Buza nawuphi na unontlalontle kwaye uya kukuxelela
, Ukuba isiseko sezakhi kukukhupha umntu kwimvakalelo yexhoba. Xa umntu ethatha uxanduva ngekamva lakhe - uya kuba sele eyifumene indlela yokusindiswa. Kwaye ukuba inomsindo-iphinde ibe nomsindo, ulwimi lomsindo ..
Ngayo yonke intlonipho "icandelo lethu" ngoyaba izikhundla ezahlukeneyo ngokupheleleyo ukuba namhlanje phantse imvumelwano yobungcali (andiyiyo ingcaphephe kwaye ndinazo nezikrokro malunga nale mvumelwano, ukanti ungayihoyi ngokucofa nje kuba uGqr. Zibani-bani watsho). Ngaphezu koko, kwanamazwi akhe, ubuncinane njengoko uwacaphule, ayathandabuza. Ndingatsho kwakhona ukuba ukuba ukholelwa kakhulu kwaye uzimisele kakhulu kwaye utyekelo lwakho aluphelelanga unokoyisa. Bangaphi abakhoyo? Kwaye bangaphi abanye? Bangaphi kubo abaphumelelayo? Ngaba unikile amanani? Inzululwazi isebenza ngoqikelelo lobungakanani hayi ngezilogeni (mhlawumbi wayizisa yonke loo nto, kodwa ngokutsho kwakho andizange ndibone nto kuyo).
Amanye amagqabaza akho acace gca, njengabo bangaphambili. Ngubani apha owathi uMaharik wayenenjongo yokubavumela ukuba bakhumbule? Kwaye sijongene nabagwebi?! Ukuba awuqondanga, ndiya kucacisa ibango lam. Indlela yenu inesibophelelo sokuziphatha sokuthobela ulindelo lwabazali kuba bandizala baza batyala imali kum. Ke ukuba bandicela ukuba nditshate neqabane elithile hayi umntu ongaziwa - ngokokubona kwakho bekufanele ukuba ndibathobele, akunjalo? Ewe kunjalo. Kodwa ukuba wenze ntoni, uthi hayi (kwaye ke walawula eRama). Iphi isimilo apha? Intsingiselo: Akuyomfuneko ukuthobela abazali xa ukhetha iqabane. Abanalungelo lokundinyanzela ngobomi bam. Ngoko ke, kubaluleke ngantoni ukuba ikhunjulwe okanye ayikhunjulwa? Umahluko phakathi kwabo u-halakhic, kodwa wathetha malunga nesibophelelo sokuziphatha sokuthobela iimfuno zabazali, kwaye kulo mbandela akukho mahluko. Ngokuchasene noko, ukukhetha ibhinqa endaweni yendoda kukubandezeleka okukhulu kwaye phantse akunakwenzeka kunyana, kodwa ukutshintsha iqabane elinye kunye nomnye kuyinto elula engenakulinganiswa. Ngoko kutheni kunganyanzelekanga ukuba ayenze le nto? Kwaye ngolwimi lwakho: ngubani ovumele indoda ukuba ibophe abazali bayo kwaye ibangele intliziyo ebuhlungu esibingelelweni seminqweno yakhe ekhokelela kwiqabane elifanayo elifunayo. Ngubani oya kuhlaba iminqweno yakhe kwaye athathe elinye iqabane kwaye abangele abazali bakhe abathandekayo baneliseke kakhulu. Kwaye ngokubanzi, ukuba akakhululekanga kwaye kunzima kuye - makazimisele kwaye akholwe kwaye aye kuGqirha uMoses kwaye uya kumnceda ukuba aphumelele. Yintoni ingxaki?
Kwaye malunga nokuphela kwamazwi akho, umntu onomhlaza uya kufumana indlela yokusindiswa ukuba unokukholelwa kuye ngokwakhe. Kwaye kunjalo sonke esinye isigulana esingapheliyo. Ezi zizilogeni ngokungathandabuzekiyo zingakhathali kunye nobudenge obuthandabuzekayo besiXesha Esitsha. Bandibuyisela kwibali likaRash Shevdron. Kulula ukuthi xa uthetha ngabanye awukhathali. Buza nawuphi na unontlalontle kwaye uya kukuxelela oku.
Masiqale ukusuka ekugqibeleni:
Andizange ndithi umntu onomhlaza ngokuqinisekileyo uya kusindiswa. Ndandisithi umntu onesifo esinganyangekiyo esibonakala singanyangeki ukhangela iyeza lokunyanga. Wathi ukumkani uHezekiya, umprofeti kaThixo kuye, Kuba ufile, awusayi kuphila. Uphendle wafuna, ufumana isigwebo sezulu ngothando, imvume yanikwa ugqirha ukuba aphilise - angalahli ithemba.
Kukho umYuda othandekayo, uR. Cohen-Melamed, owayenesifo se-muscular dystrophy kwiminyaka engaphezu kwe-15 eyadlulayo, yaye omnye woogqirha wamxelela ukuba wayesalelwe ziinyanga ezimbalwa kuphela ukuba aphile.” UGqr. Melamed akazange amphulaphule. kwaye uphila ukuza kuthi ga namhlanje kwaye ubhala iincwadi Okwangoku ukwazile ukuya kumngcwabo kagqirha owamqinisekisa ngokubhubha kwakhe okufutshane):
Ngokuphathelele umkhwa -
Andizanga ukuqhuba iingxoxo zefilosofi nezenzululwazi, ewe akunakwenzeka? - Ndibona phambi kwamehlo am umfanekiso omnye kuphela, umfana obhidekileyo noneentloni okrazulwe phakathi kokutyekela kwakhe kunye nokholo lwakhe. Akukho ndlela ehlabathini yokuphuma ngabo bobabini umdali nomdali. Ithuba lakhe kuphela lokuphuma kwi-rift kukufumana isisombululo, kwaye ndizama ukufumana idilesi apho kunokwenzeka ukuba ayisombulule ingxaki.
Ndiyoyika kancinane 'ingcebiso yengqondo', ngenxa yezizathu ezininzi: banethemba kakhulu, kwaye umfana oza nomgangatho ophezulu wokulindela kwaye ngokukodwa ukulindela impumelelo ekhawulezileyo, unokuwela ekuphelelweni lithemba. Ngaphandle koko, kukho ezinye zeengcali zonyango ngamavolontiya angengowobuchwephesha. Kwaye 'indlela yabo yokuphindaphinda', ezama 'ukuxhobisa ubudoda' - ilungile kuphela kwezinye iimeko, kwaye akubonakali kum ukuba esi sisizathu sazo zonke iimeko.
Yiyo loo nto ndiye ndajikela kwicala likaGqr. Zvi Mozes, endingamaziyo buqu, kodwa isimbo sakhe esinethemba kodwa esinenkathalo- sivuselela ithemba elilumkileyo kum. Ndikunye nawe, ndimcaphule nje ngokufutshane. Kwizimvo zam kumanqaku amabini kaYoav Sorek, ndazikhathaza ukukopisha imihlathi emibini ephambili kumazwi akhe acacisa amathuba kunye namathuba abo (kuba 'Ikhonkco' andazi ukuba ndenze njani, okwangoku mna 'Linkopov' ayinyangeki :).
Amava ogqirha onamava endle, akahambi ngeenyawo… kwaye ngumsebenzi wethu ukwazisa abo bangekagqibi malunga nobukho bayo, kunye nethuba lokuzama ukufumana uncedo kuyo.
Ukutolika kwakho kwiMaharik ukuba unyana akanatyala nto kubazali bakhe akucaci ngokupheleleyo. Kum ingathi abanye abantu bayayiqonda lento imalunga nembeko yotata owalahlwayo ngenxa ye mitzvah yonyana atshate umfazi, athi xa ethe wafumana inkazana yasenkonzweni athande uMan Mifis angamfumana? UGqirha uMoses unokunceda umfana ofuna ukwenza uKono afune ukuqhawula umtshato owalelweyo, kodwa ahlukane nomtshato olungileyo ezulwini kunye nabantu - makube njalo.
Yaye kuyo nayiphi na imeko, kwanaxa umfana evunyelwa yaye eyalelwa ukuba atshate ngokukhetha kwentliziyo yakhe ngokuchasene nentando yabazali bakhe, ubophelelekile ukuba athethe kubo izinto ezilungileyo nezithuthuzelayo, ngobubele nangentlonelo yonke. Ukuze athi kubo: ‘Bazali abathandekayo, ndiyayithanda yaye ndiyixabisa gqitha yonke into enindenzele yona, yaye ndiqinisekile ukuba niya kuba noyolo olungcwele kule ntombazana ililungisa nomfazi oligorha’. Kwaye ngokuqhelekileyo nangona bengavumelani ngokukhawuleza - baya kuxolelana xa umzukulu ezalwa.
Kuya kuba mnandi kangakanani na kumyalelo waseKrete owadalwayo kuthiwe 'lizothe'?
Ndibhale uxolo kule ndawo ngobubukhali bentetha zam, kwaye ndiyaphinda apha nalapha (khange ndiqonde ukuba kutheni kuqhutywa ngamajelo amabini. Andiziboni izinto apha ezifuna imfihlo egqithisileyo. ingxoxo ijikwe ngempazamo kwi-imeyile apha).
Ngokwenyani, eyona nto yayindikhathaza kakhulu yayingumxholo, kodwa ndandingavumelani kakhulu nomxholo. Kwaye iintlobo zeentlobo zakho ziya kungenelwa.
Ngokuphathelele iMaharik kunye nombono wokuhlonipha ummandla wabanye, bona amagqabantshintshi am kumanqaku apha:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Ngendlela, kucacile ukuba indlela yokuthetha kubazali ifanele ibe nentlonelo.
Konke okuhle kwaye kwakhona uxolo
Kwi-S.D. XNUMX ku-Elul, iphe
Iingxoxo zam zamva nje kunye noRabbi Avraham ezenzeke phakathi kwethu kwi-imeyile yabucala, kwaye zilayishwe kwindawo ngobu busuku-bezingajoliswanga nguMaikra ukuba zipapashwe kwindawo, kwaye kufuneka ziphathwe 'njengoyilo', olungeyomfuneko. bonisa isiphelo esihambelanayo.
Ndicela uxolo ngokungaqondi. Njengoko ndabhala, ndacinga ukuba ngempazamo izinto ziye kwi-imeyile eqhelekileyo endaweni yesayithi, kwaye andizange ndibone kuzo nantoni na ephambukayo kwintetho eyenzeka apha kwisayithi, ngoko ke ndazithumela (ngexesha langempela). ) ukulayisha kwindawo. Kuphela ngoku baye beza kuba ngoku kuphela ingxoxo iphelile. Kwaye ngenene izithuba zokugqibela phakathi kwethu xa ndiqaphela ukuba azenzelwanga apha andizange ndifake. Phofu, uxolo kwakhona.
Kwisilumko esinguRabi iMDA, ezele bubulumko nesayensi, njengengcali yezoqoqosho ethembekileyo kunye ne-daredevil, uDelbish Mada, ukufunda iTorah kwaye ayifundise, kwaye ethweswe isithsaba kuyo yonke imilinganiselo, elungileyo kwaye ebekekileyo-uya kwandisa uxolo lwakhe kuHada, kwaye andise iTorah kwaye isatifikethi, ukukhanyisa amehlo oluntu! -Uxolo nosindiso olukhulu,
Ndiza kufuna ngaphezulu koku, kutheni isixeko sichanekile malunga nengxaki yokuba unyango lwengqondo lobuchwephesha lubandakanya ukuchithwa kwemali okunzulu, okuthi ngamanye amaxesha kuthintele abo bakufunayo, kwaye kwenza kube nzima kubo ukuzingisa kubo.
E-Kochav Hashahar kunye neendawo ezingqongileyo, baye bafumana isisombululo ngokuseka ingxowa-mali ebizwa ngokuba yi-'Chaim Shel Tova' (elawulwa nguRabbi Natan Shalev, urabhi waseMevoot Jeriko), enceda ngemali yentsapho kunye nezibini zonyango lwengqondo kwabo banesidingo.
Kufanelekile ukwamkela le khosi yesenzo kuyo yonke ingingqi kunye nendawo, kunye nokuseka iimali ezifanayo eziza kukhuthaza kwaye zincede kukhathalelo lwengqondo yobungcali kumntu kunye nosapho.
Wathetha umfana emawaka akwaYuda ngokuwoyika kwakhe isandla sakhe;
Damchavi Kida, Imibuliso kunye nombulelo, S.C. Levinger
UShalev noYesha Rab kuMnu. Chen Chen ngeminqweno yakhe kunye namazwana.
Kwaye kuye nakum siya kubamba i-weyi kwisaqhwithi, intonga ye-captain yenziwa ukuba ijinga. Ukuba indoda yaseRoma ikuxelela ikrele kwaye aya, yazi ukuba iYerusalem phezu kwenduli yakhiwe.
Soyisa ingonyama ekukhanyeni kwezikhanyiso, sihlangulwe kuyo yonke imimiselo yobugqwirha. Umntu uya kukhwaza umntakwabo, oonyana neentombi kunye nomlungiseleli ozamazamayo. Kwaye ndiza kutyikitya isicelo kumhlali ongcungcuthekiswayo, esiza kumtyikitya ngokusisigxina kulo nyaka.
30 Tishrei 10 - 2016/12/35 ngo XNUMX:XNUMX
Ingxoxo ngalo mbandela iya kufumaneka entwasahlobo kumanqaku:
URoni Schur, 'Kuyenzeka ukuba utshintshe (kunyango lweendlela ezichaseneyo kwi-Advice of the Soul '), iTzohar XNUMX (XNUMX), kwi-website ye-Asif ';
URabbi uAzriel Ariel, ‘Ngaba umntu unokutshintsha? (Impendulo) ', phaya, phaya;
UGqr Baruch Kahana, 'Inkolo, uMbutho kunye neeNdlela zokuBuyisa', iTzohar XNUMX (XNUMX), kwiwebhusayithi ethi 'Asif'.
UGqr. Zvi Mozes, 'Ngaba Unyango loTshintsho lusebenza ngokwasengqondweni', kwiwebhusayithi ye'Root'.
Isishwankathelo esineenkcukacha zeentlobo zonyango kunye nezikhundla ezibophelelayo nezingalunganga - kwiWikipedia, ingeniso 'yonyango lokuguqula'.
Ngoku ndifumene impendulo yombutho we-psychoanalytic kwaSirayeli "kumagama oorabhi":
Njengama-psychoanalysts azinikele ekuqondeni okunzulu kwengqondo yomntu kunye nokunceda ekubandezelekeni kwabo ngokusebenzisa i-psychotherapy, sicinga ukuba ngumsebenzi wethu ukuchasana neengxelo ezixhaphazayo ezisandul 'ukwenziwa ngabarabhi malunga noluntu lwe-LGBT. Amabango ukuba ubufanasini luphazamiseko ngengqondo, "ukutenxa", "ukukhubazeka kufuna unyango ngokwasengqondweni", lunyhasho kakhulu isidima kunye nenkululeko yomntu - kwaye iyaphikisana nesikhundla esamkelweyo mihla kunye nolwazi lobuchwephesha lwangoku malunga nokuqhelaniswa nesondo kunye nesazisi. Ukunika 'ukuxilongwa ngengqondo' ngoorabhi kunye nabafundisi abangaqeqeshelwanga oku kuphosakele kakhulu kwaye ngokwenene sibona ukubonakaliswa kweembono ezinjalo njengengozi yokwenene kwimiphefumlo kunye nobomi bolutsha kunye neentsapho zabo.
Yossi Triast (uSihlalo) - egameni loMbutho we-Psychoanalytic kwaSirayeli
Kwaye ndiyazibuza ukuba indoda isibhanxa okanye ixoki. Le nto ayibhalayo yimbudane egqithileyo kakade. Usenokuba nembono enye okanye enye kumbuzo wokuba ubufanasini bugqwethekile okanye akunjalo, kodwa akunanto yakwenza nolwazi lobuchwephesha asenokuba unalo. Ngoko ubonakala ngathi usisidenge. Nangona kusenokuba ukuxhaphazwa ngabom umnqwazi wakhe professional ukukhuthaza ixabiso ajenda, yena ke ulixoki. Ndishiya umfundi ukuba akhethe phakathi kweenketho.
20 Tammuz 07 - 2020/14/43 ngo XNUMX:XNUMX
Andiqondi ukuba usisibhanxa. Kukho ukunqongophala kolwazi okuphazamisayo apho, kwaye kubonakala nakubantu abakrelekrele. Ukuba uzihlamba ingqondo ngento ixesha elide ngokwaneleyo, uqala ukucinga ukuba yinyani kwaye ayinakuphelelwa. Ngelishwa oku kwenzeka kancinci.
20 Tammuz 07 - 2020/15/00 ngo XNUMX:XNUMX
Ndiphendule uPingback apho
Fingback: Qaphela ingcali Kumthetho kunye neenkcukacha
Joyina abongezelelweyo 3,095 ababhalisile
Hananeli Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Ngubani umkhweli? Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Ngokwengqiqo Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
mikyab Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)